Tun Tun's Photo Diary: Flower Dome @ Garden By The Bay #1
Flower Dome @ Garden By The Bay #1
2013-Oct-15, Garden By the Bay ကို 2012 ခုနှစ်လောက်က စဖွင့်တာပါ။ ဖွင့်ကတည်းက ခဏခဏ ရောက်ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် Flower Dome ထဲကို တခါမှ မ၀င်ဖူးဘူး။ ၀င်ကြေး ပေးရလို. မ၀င်ဖြစ်တာပါ။ ၀င်ကြေး က Flower Dome ဆိုရင် $12 ၊ နောက်ထပ် Dome တခုဖြစ်တဲ့ Cloud Forest ကိုပါ ၀င်မယ်ဆိုရင် ၂ခုပေါင်း $20 ပါ။ Cloud Forest ကိုတော့ အခုထိ မ၀င်ဖူးသေးဘူး။ အထဲမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်စရာ သိပ်ရှိမယ် မထင်လို.။ Flower Dome ကြတော့ ပန်းတွေ အစုံ ဓါတ်ပုံရိုက်လို.ရတယ်လေ။
လက်မှတ်က တစ်ရက်လုံး ခံပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အထဲဝင်ပြီး အပြင်ပြန်ထွက်ချင်ရင်ထွက်၊ ထွက်ပေါက်မှာ လက်ပေါ်ကို တံဆိပ်တုံးထုပေးတယ်။ ပြီးရင် အဲ့ဒါတံဆိပ်တုံး ပြပြီး ပြန်ဝင်လာလို.ရတယ်။ ဥပမာ- ဗိုက်ဆာလို. အပြင်ထွက် မုန်.စားချင်ရင်ပြီး ပြန်လာလို.ရတယ်။ Garden By The bay ထဲမှာ စားသောက်ဆိုင်တွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးကြီးမယ့်ပုံပေါက်လို. ၊ ကျွန်တော်ကတော့ Texas Chicken မှာပဲ စားဖြစ်တယ်။
အဲဒီတုန်းက က Deepawali ကာလမို. Deepawali နဲ. ပတ်သတ်တဲ့ Decoration မျိုး လုပ်ထားတယ်။ Flower Dome က အချိန်ကာလ နဲ.အညီ Decoration တွေ ပြောင်းတယ်။ နောက်ပြီး April လလောက်ဆို ရင် Tulip Festival လဲရှိသေးတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က $60 ကျော်တန် Yearly Pass တောင် ၀ယ်မလားလို.။ တစ်နှစ်မှာ ၆ခါ လာရင်ကိုပဲ တန်ပြီလေ။
Flower Dome ထဲမှာ Air con လွတ်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ပန်းနံ.အတုတွေ ပဲ လွတ်ထားသလား၊ တကယ့်ပန်းက ထွက်တဲ့ ရနံ.လား မပြောတက်ဘူး။ တော်တော်လေးကို မွှေးတယ်။ ၀င်ပြီးရင် အပြင်ပြန်မထွက်ချင်ဘူး။ အေးအေး မွေးမွေးလေး နဲ. အရမ်းကို နေလို.ကောင်းတဲ့နေရာလေးပါ။ ကျွန်တော်သွားတိုင်း Weekend တွေ ဆိုတော့ လူတွေ စည်ကားတာပေါ့။ Weekday တွေ လာနိုင်တယ်ဆိုရင် တော်တော်လေး အေးဆေး မယ်ထင်တယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ မတူတဲ့ ပန်းတွေကို တခုပြီးတခု ဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်တယ်။ နားလိုက် ရိုက်လိုက်နဲ. အလုပ်ကို ရူပ်လို.။ တချို. ကိုယ့်ထက် ဓါတ်ပုံရိုက်တာ ၀ါသနာကြီးတဲ့ သူတွေတောင်ရှိသေးတယ်။ Tripod တွေ၊ Flash တွေ နဲ. အားရပါးရကို ရိုက်နေတာ။
Flower Dome ထဲမှာ ပန်းတွေကို ဒေသအလိုက် ခွဲထားတယ်။ ဥပမာ Australia က အပင်တွေ၊ Africa က အပင်တွေ စသဖြင့်။ အဲ့ဒါကြောင့် $12 နဲ. တနေရာထဲမှာ ကမ္ဘာအနှံ.က ပန်းတွေ၊ သစ်ပင်တွေကို အေးအေးဆေးဆေး ကြည့်ခွင့်ရတာ တော်တော်တန်တယ်လို. ပြောရမယ်။
Flower Dome ထဲမှာ အထပ် ၂ထပ်ရှိပါတယ်။ အပေါ်ထပ်မှာက Cactus ပင်တွေ မျိုးစုံတွေ.ရပါတယ်။ Garden By the bay ထဲမှာပဲ Outdoor Cactus Garden ဆိုပြီး သက်သက်ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါက ၀င်ကြေးမပေးရပါဘူး။ ဒါကတော့ indoor Cactus ပင်တွေပေါ့။
ပုံတွေကများလို. ပို.စ် တွေ ခွဲတင်ရမယ်။ ဒါတောင် ကိုယ်က လှတဲ့ပန်းတွေကိုပဲ ရွေးရိုက်တာ။
at 7/09/2016 10:16:00 AM
Flower Dome @ Garden By The Bay #3
Flower Dome @ Garden By The Bay #2